Luyini uthingo lomlilo futhi lwakhiwa kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Sivele sabona ukuthi imvelo yinto engakholeki futhi ingasikhombisa izehlakalo ezejwayelekile nemicimbi ngobuhle obukhulu. Kulokhu, sikhuluma ngesenzeko esenzeka emkhathini esaziwa njenge uthingo lomlilo. Yize leli gama lidukisiwe kancane kulokho elikubonisayo ngempela, kuyisimo esivela ngokufana esibhakabhakeni futhi esidala imidwebo emangazayo impela. Kuyaziwa nangegama lamakhothamo ajikelezayo. Yigama elifana kakhulu nelikubonisayo. Imidwebo abayakha imibala emibalabala kakhulu. Kodwa-ke, umbuzo obuzwa ngaphezu kweyodwa uthi, akhiwa kanjani futhi ngani?
Yebo, kule ndatshana sizokwembula zonke izimfihlo zothingo lomlilo. Sizochaza ukuthi lakhiwa kanjani futhi ngasiphi isizathu.
2 Imbangela yothingo lomlilo
3 Imvelo yamafu e-cirrus
4 Ungayibona kuphi uthingo lomlilo
Yize kuyisimo esifana nothingo oluvamile, akuyona into efana nezizathu zokwakheka noma zofuzo lwayo. Kungenzeka ukuthi, empilweni yakho yonke, uyibone kaningi. Yimigqa ekhangayo yemibala ehlukene kodwa iyafana naleyo yothingo lwenkosazana oluvamile. Le mibala icatshangelwa ngenxa yokukhanya okudluliswa amafu amafu e-cirrus. Lokhu kudala uhlobo lokuqagela kombala oluzungeze i-amalgam ye-chromatic ehlungwa emafwini.
Uma kwenzeka ubhekisisa ngqo lesi simo futhi usithwebula, kungenzeka sikunikeze izithombe ezingcono kunezenziwa uthingo lwendabuko. Yize ingenaso isizathu esifanayo sokwakheka futhi ibukeka njengothingo lwangempela, Ibizwa ngokuthi uthingo lomlilo ngoba lwenzeka ngezinsuku ezome kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ifana nokwakheka kwe-chromatic futhi kwenzeka ezinsukwini ezomile. Umphumela kuphela ukuthi awudingi imvula ukuze ivele. Umphumela nokubukeka abanakho yilangabi elikhanyayo elingabonakala ku-prism wamafu asobala.
Imbangela yothingo lomlilo
Sizochaza igxathu negxathu yiziphi izizathu nezimbangela zokuthi kungani kwakhiwa uthingo lomlilo. Lawa ma-arcs ajikelezayo anezakhi zofuzo zawo ngenxa yamafu e-cirrus. AmaHalos ajwayelekile ezimpilweni zethu zansuku zonke futhi akha izigcawu ezinhle esibhakabhakeni sethu. Kuyimibuthano ekhanyayo yemibala ehlukene kwesinye isikhathi futhi ezungeza ilanga noma inyanga kwezinye izindawo. Kulezi zikhathi zingabonakala ngomqhele obonwayo ingaphakathi lawo limnyama kunezulu elizungezile. Lawa ma-halos akhiwa yimidlalo ehlukene yokukhanya ngaphakathi kokwenzeka emvelweni.
Yebo, lapho sifaka imibala yothingo ku-halo evamile futhi sisusa umphumela oyimpumputhe welanga noma wenyanga, Singaba ne-arc enezingqimba ezungeza noma eyaziwa kangcono njengothingo lomlilo. Lo mkhuba ungagcinwa ngaphandle kwezinkinga ngaso sonke isikhathi kwazise ilanga alikho ukuze ungakwazi ukulibuka ngqo. Siyazi ukuthi ukubuka ilanga noma ukuzungeze isikhathi eside kungaba yingozi kuma-retina ethu. Kunezimo zabantu abaye baphuphutheka ngokuphelele ekubhekeni ilanga isikhathi eside kakhulu.
Lesi siqeshana semibala eminingi sakhiwe ezindaweni eziphakeme futhi sidinga izimo ezingenakuphepheka ngokuphelele. Okokuqala, ilanga kudingeka libe cishe ngama-degree angama-58 ngaphezu komugqa womkhathizwe. Sidinga inani elihle lamafu e-cirrus esibhakabhakeni angasabalalisa ukukhanya. Lawa mafu angamakhilomitha ayi-8 ukuphakama futhi aqhubeka ngemigqa emide, emincane. Ngenxa yalawa mafu, ubukeka bemicu emhlophe benziwa ngemuva okungeluhlaza okwesibhakabhaka. Uma sengeza imibala yothingo kule ndawo enhle, sizoba nokuthile okungakholeki ngokuphelele.
Imvelo yamafu e-cirrus
Ukuze uchaze umehluko phakathi kothingo olujwayelekile nothingo lomlilo, uhlobo lwamafu e-cirrus lubalulekile. Ngenkathi into yokuqala ingumphumela wokukhanya kwelanga emaconsi emvula asamisiwe emoyeni, ama-arcs azungezile adinga isimo sezulu esomile. Lesi simo sezulu esomile singenxa yesidingo sezinhlayiya ezincane ze-ice ezinamacala ayisithupha ezifihlwe ngqo emafwini e-cirrus. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukwazi ukwakheka nobunjalo balolu hlobo lwamafu.
Kungenxa yesimo salezi zinhlayiya ezincane zeqhwa lapho imisebe yelanga ingakhombisa futhi isakaze emafwini e-cirrus, yakhe imidwebo emide yemibala. Kwesinye isikhathi la ma-arcs made kangangokuba ayakwazi ukunweba kuwo wonke i-arc ebonakalayo yesikhundla sethu. Ukwakheka kuyamangaza futhi kuyingqayizivele ngesizathu esilandelayo. Kukho konke esishilo, kufanele sengeze isici esisodwa. Kungukuthi izinhlayiya zeqhwa kufanele zibe sendaweni ecishe ibe maphakathi maqondana nobudlelwano bemisebe yelanga. Ngaphandle kwalokho, yayingekho indlela yokwelula lokhu kukhanya ngamafu e-cirrus.
Lokhu kusho ukuthi, izikhathi eziningi sibona uthingo lomlilo, ubude balo bufushane kakhulu. Lezi zimo ezidinga ubukhona zikhona isikhashana. Ilanga liyaqhubeka nokushona futhi i-engela enamakristalu eqhwa ayisafani nokuyikhombisa.
Ungayibona kuphi uthingo lomlilo
Manje njengoba sesihlaziye ukuqeqeshwa nesizathu sako, sizochaza ukuthi yiziphi izindawo zomhlaba nokuthi zivame ukuba njalo ngasiphi isikhathi. Ukuyibona udinga indawo enesimo sezulu esomile futhi lapho ilanga lingama-degree angama-58 noma ngaphansi. Uma uya emazweni aseNordic, ngeke uvele ubone enye yalezi ubukhazikhazi obugcwele.
Elinye lamadolobha amahle ukubona lokhu yiMexico City noma iHouston. ESpain sinezindaba ezimbi, sikude kakhulu enyakatho ukuthi sizibone.
Ngiyethemba lolu lwazi lusebenza ekufundeni kabanzi ngothingo lomlilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uthingo lomlilo